အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ လှပသာယာတဲ့နေရာသစ်..မော်ရတိုင်းကျွန်းတွေဆီ… 🏝 (Morotai Island, the Pearl of Pacific Ocean; the charm of Indonesia) – NU MYAT AROUND THE WORLD
August 20, 2019 April 20, 2021 Posted in Adventure, Asia, Travel, UncategorizedTagged Asia, Beach, indonesia, Island, morotai, Travel
Morotai ကျွန်းတွေဆီ… 🏝
ဒီကျွန်းလေးက ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ ပုလဲရတနာတဲ့လေ….
နုမြတ်တို့ဆီမှာ အင်ဒိုနီးရှားဆိုရင် ဘာလီနဲ့တွဲသိကြတာများပါတယ်။ ဘာလီအပြင် မြို့တော် ဂျာကာတာနဲ့ဂျော့ဂျာကာတာတို့ကိုပါ သွားလေ့ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ အင်ဒိုနီးရှားက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်းအများဆုံးနိုင်ငံပါ။ အာရှတိုက်နဲ့သြစတြေးလျတိုက်အကြား ပစိဖိတ်နဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေပေါ် တည်ရှိနေတဲ့ကျွန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော်တောင်ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူမှသိပ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ကျွန်းတွေလည်း အများကြီးရှိသလို Tourist တွေ ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးတဲ့ ကျွန်းတွေလည်း ရှိနေတုန်းပါပဲ။ Morotai က တော့ အဲ့လိုကျွန်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဘာလီကျွန်းလို Tourist တွေနဲ့ ပြည့်နှက်မနေဘဲ သဘာဝနဲ့ တသားတည်းကျနိုင်တဲ့ ကျွန်းလေးပါ။
အင်ဒိုနီးရှားကနေရာသစ်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး Social Influencer တစ်ယောက်ဆီကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး လိုက်ပို့ပေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု Social Influencer အဖြစ် အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ အရမ်းလှတဲ့ Moratai ကျွန်းတွေဆီရောက်ခဲ့ရပါတယ်။
Morotai ကျွန်းက အင်ဒိုနီးရှား ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ နေရာသစ်ဖြစ်ပြီး လူတွေသိပ်မသိကြသေးတော့ လူရှင်းပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက ကမ်းခြေတွေ ကျွန်းတွေလို နေရာတိုင်း Tourist တွေနဲ့ပြည့်မနေပါဘူး။ ဆူဆူညံညံမရှိဘူး။ မတိုးရဘူး။ သဘာဝတရားကြီးကို အပြည့်အဝခံစားလို့ရပါတယ်။
လူတွေရှင်းတာမှ ဘယ်သွားသွား ကိုယ်တွေပဲရှိတာပါ။ လူအလာနည်းတာရဲ့ တစ်ဘက်ဆိုးကျိုးကတော့ Tourist တွေအတွက် Facility တွေ ကောင်းကောင်းမရှိတာပေါ့။ ဥပမာ-ဟိုတယ်တွေနည်းပါတယ်။ Resort ၂ခုပဲရှိပြီး ဟိုတယ်အသေးစားနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်းတွေမှာဆိုလည်း ဆိုင်မရှိပါဘူး။ ဆိုင်ရှိရင်လည်း ဝယ်စားစရာ ဆိုင်တွေတစ်ဆိုင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်းတွေသွားမယ်ဆို ကိုယ့်အတွက်အစားအစာတွေကို ကိုယ်တိုင်သယ်လာမှရပါမယ်။
Moratai ကျွန်းတွေက ရှုခင်းလှသလောက် သွားရတာတော့ခက်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားက ကျွန်းတွေများသလောက် နိုင်ငံကတအားကျယ်တော့ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားရတာဝေးပါတယ်။ Morotai ကျွန်းက နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာ ရှိတာဆိုတော့ ဂျာကာတာကနေ သွားရင်တောင် လေယာဉ် ၂ဆင့်စီးရပါတယ်။ Jakarta ကနေ Manando ကို အရင်သွားပြီးမှ Manando ကနေ Moratai ကိုလေယာဉ်ထပ်စီးရပါတယ်။ ကြားထဲမှာ ကျွန်းပတ်ပြီးတစ်နေရာခဏရပ်ပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်ကနေ ဂျာကာတာကိုလည်း direct flight မရှိတော့ Singapore, Thai နဲ့ Malaysia တစ်ခုခုကို Transit လုပ်ရတာဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာလည်း လေယာဉ်၂ဆင့်စီးရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်ကနေ Morotai သွားဖို့ဆို လေယာဉ် ၄ဆင့်စီးမှရောက်မှာပါ။ ကိုယ်တွေတုန်းကတော့ Malaysia Airlines နဲ့ မလေးရှားကို Transit ဝင်ပြီး ဂျာကာတာကို အရင်သွားကာ ရောက်လက်စနဲ့ ဂျာကာတာကိုပါ ၁ရက်ဝင်လည်လိုက်ပါတယ်။ Jakarta မသွားချင်ရင် ဘာလီတို့ Yogyakarta တို့နဲ့တွဲသွားရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီကျွန်းကို အဓိကလာလည်ကြတာ နူးညံ့တဲ့ သဲတွေရှိတဲ့၊ စိမ်းပြာလဲ့နေတဲ့ ရေတွေရှိတဲ့ ကမ်းခြေတွေ၊ ကျွန်းတွေကြောင့်ပါ။ ရေအောက်ရှုခင်းတွေလည်းလှလို့ ရေငုပ်တဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့ကြပါတယ်။ ရေအောက်မှာ လင်းပိုင်တွေ၊ ငါးမန်းသေးသေးလေးတွေတောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ ဒီကို လာတဲ့သူတွေက ရေငုပ်ကြတယ်။ Snorkeling လုပ်ပြီး ရေအောက်ရှုခင်းကြည့်ကြတယ်။ ကျွန်းပတ်ကြတယ်။ ကမ်းခြေမှာရေဆော့ကြတယ်။ ပြတိုက်သွားလေ့လာကြပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ များများမရှိသလို Nightlife တွေ Night Market တွေလည်း ဒီမှာမရှိပါဘူး။
ကျွန်းမကြီးကနေ Speed Boat နဲ့ အနီးအနားရှိ ကျွန်းတွေဆီသွားလို့ရပါတယ်။ Morotai ကို အဓိကလာကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်းတွေဆီ သွားချင်ကြလို့ပါ။ Speed Boat ဌားမယ်ဆို တစ်နေကုန်ကို တစ်စီးကို သူတို့ငွေ တစ်သန်းလောက် ပေးရပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၁သိန်းကျပ်လောက်ရှိပါတယ်။ လူအယောက် ၂၀ လောက်ဆန့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်းသွားခိုင်းရုံပါပဲ။ နုမြတ်တို့သွားခဲ့တဲ့ကျွန်းတွေကတော့ ….
ဒီကျွန်းက Morotai မှာ နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ ကျွန်းကြီးနဲ့ ကျွန်းငယ် ၂ ခုရှိပြီး ကျွန်း၂ ခုက တစ်ဆက်ထဲဖြစ်နေတာပါ။ သဲသောင်လေးခြားထားတော့ ရေကျတဲ့အချိန်ဆို လမ်းလျှောက်ကူးလို့ရပါတယ်။ နုမြတ်တို့ရောက်တော့နေ့လည်၁ နာရီမှာ ကျွန်းကူးတာ ခြေသလုံးတစ်ဝက်လောက်ရေတက်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းလျှောက်ကူးလို့ရပါတယ်။ ရေထဲဖြတ်လျှောက်ရတာ ပိုတောင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါသေးတယ်။
ကျွန်းကြီးဘက်မှာ ညအိပ်ညနေတည်းလို့ရအောင် အဆောင်တွေဆောက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ကမ်းခြေမှာ ထီးလေးတွေ အဆောင်လေးတွေ ထိုင်ခုံလေးတွေလည်း ထားပေးထားပါတယ်။ ပြေးလွှားဆော့ကစားပြီး Adventure နှစ်သက်သူတွေအတွက် ရေပြင်ကျယ်ကြီးပေါ်မှာ ရေပေါ်ကစားကွင်းလည်း ထားပေးထားပါတယ်။ တစ်နာရီမှ ၂၅၀၀ ကျပ်လောက်ပဲပေးရတယ်။ ရေလွှာလျှောစီးတွေရော၊ ဧရာမဖော့တုံးကြီးတွေပေါ်ဆော့ရတာတွေရော စုံနေတာပဲ။ ကိုယ်တွေဆီမှာလည်း အဲ့လိုထားပေးရင် ကောင်းမယ်နော်။ တခြား Water Activities တွေအနေနဲ့ Speed Boat, Banana Boat နဲ့ Kayaking လှေလှော်တာတွေလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်းသေးမှာတော့ အဲ့ဒါတွေမရှိဘူး။ အသည်းပုံလေးပါတဲ့ DoDoLa ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးပဲတွေ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ကျွန်းကသဲတွေက အရမ်းနူးညံ့တာပဲ။ အင်ဒိုနီးရှားမှာအနူးညံ့ဆုံးသဲဆိုပဲ။ တကယ်လည်း နူးညံ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဘက်မှာ ညအိပ်ညနေတည်းမယ်ဆိုရင်တော့ Tent ထိုးပြီးတည်းလို့ရတယ်တဲ့လေ။
အဲ့ကျွန်းမှာ အချိန်ပေးပြီး အနားယူသင့်ပါတယ်။ ကျွန်းဆိုပေမဲ့ အရမ်းကြီးတဲ့ကျွန်းတွေမဟုတ်တော့ အရှေ့ဘက်ကြည့်လည်းပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ပြာ၊ အနောက်ဘက်လှည့်ကြည့်လည်း ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ပြာဆိုတော့ သိပ်ကိုသာယာပါတယ်။ ကျွန်း၂ ကျွန်းဆက်နေတဲ့နေရာကလည်း အရမ်းလှပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် Drone သယ်သွားပြီးရိုက်သင့်ပါတယ်။ ရေတွေကလည်း စိမ်းပြာလဲ့နေပြီး ကြည်စိမ့်နေတော့ ရေကူးလို့လည်းရတယ်လေ။
ဒီကျွန်းလေးကတော့ တစ်ကျွန်းလုံးမှာမှ လူတစ်ယောက်ထဲနေတဲ့ကျွန်းပါ။ အဲ့လူကတော့ အဲဒီကျွန်းကိုပိုင်တဲ့ ကျွန်းပိုင်ရှင်ပါတဲ့။ ကျွန်းပိုင်ရှင်က ဟိုးအရင်ကတည်းက အဲ့ဒီကျွန်းမှာနေလာတော့ ကျွန်းကိုပိုင်သွားတာတဲ့။ ကျွန်းကနေစွန့်ခွာသွားရင် ကျွန်းမပိုင်တော့မှာစိုးလို့လည်းနေမယ်နော်။ ကျွန်းမှာတစ်ယောက်ထဲနေနေရတာ။ လိုအပ်တာရှိရင်တော့ မြို့ထဲ မော်တော်ဘုတ်နဲ့သွားဝယ်တယ်တဲ့ ။
ကျွန်းလေးကတော့ တော်တော်သာယာပါတယ်။ အုန်းကပင်လေးတွေ အပင်လေးတွေနဲ့စိမ်းစိမ်းစိုစို သာသာယာယာရှိလှတယ်။ ရေလေးတွေဆို စိမ်းပြာလဲ့နေတာပဲ။ ရေတွေထဲငါးတွေ ကူးနေတာ အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်။ ရေတွေမဲနေတဲ့နေရာက ငါးအုပ်တွေရှိနေလို့ ငါးအရောင်ကြောင့်မဲနေတာ။ ငါးအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာရင် ငါးတွေထွက်ပြေးကြလို့ မဲနေတဲ့နေရာက ချက်ချင်းကွက်ပြီးစိမ်းသွားတာ။ ကြည့်ရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲ။
Pasir Timbul Island
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲ သောင်တင်နေတဲ့ကျွန်းလေးပေါ့။ ရေလည်ခေါင်သောင်ထွန်း နတ်သမီးနေတဲ့ကျွန်းဆိုတာ ဒီလိုကျွန်းလေးပေါ့။ တကယ်ကို စိမ်းလဲ့ပြာနေတဲ့ ရေပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ သဲဖြူကျွန်းလေးက ထင်းနေတာပဲ။ ကျွန်းပေါ် ဘာအပင်မှမရှိ ဘာကျောက်ဆောင်မှမရှိ ဘာအကောင်မှမရှိ သဲဖြူလေးတွေပဲရှိတယ်… ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ကောင်းကင်ကြီးဆိုတာ တကယ့်မြင်ကွင်းကျယ်ကြီး။ တမျှော်တခေါ်ကြီးကို လှမ်းမြင်နေရတာ။ ရေလေးတွေလည်း ကြည်နေတာပဲလေ။ ဒီကျွန်းကို နေသိပ်မပြင်းတဲ့ မနက်စောစောနဲ့ ညနေစောင်းလောက်သွားရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်။
Pasir Timbul Island Credit to AyokeMorotai Instagram
Batu Kopi (Roi Island)
ကော်ဖီနံ့ရတဲ့ကျောက်တုံးကြီးရှိတဲ့ကျွန်းပေါ့။ ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ သဘာဝကျောက်ဆောင်ကြီးက ကော်ဖီနံ့အလိုလိုရနေတာတဲ့။ လူကောင်းတွေပဲ အနံ့ရပြီး မကောင်းတဲ့လူဆို အနံ့မရဘူးတဲ့လေ။ ကိုယ်တွေဆို ကော်ဖီနံ့ရပါ့မလားဆိုပြီး အချင်းချင်းနောက်နေကြတာပေါ့။ တချို့ဆို စက်လှေပေါ်ကတည်းက အနံ့ရနေပြီတဲ့လေ။ Mocha တွေရော၊ Cappucငino တွေရောစုံနေတာပဲ။ အရမ်းကို လူကောင်းဖြစ်ချင်နေကြတာ။ 😛
အဲ့လိုတွေ လျှောက်နောက်ကြလို့လားတော့မသိ။ တကယ်တမ်း ကျွန်းပေါ်ရောက်လို့ ကျောက်တုံးကြီးဆီ အပြေးအလွှားသွားရှုကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်သူမှအနံ့မရကြဘူးလေ။ အနားကပ်ရှုလည်းမရ၊ ကျောက်ဆောင်အောက်ခြေကို ရှုကြည့်လည်းမရနဲ့ ဘာအနံ့မှမရကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာနေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ တစ်ချက်တစ်ချက်ကော်ဖီနံ့လေး ပျံ့လာတာကို တချို့တလေရကြပါတယ်။ ကိုယ်လည်း မရှုကြည့်တော့တဲ့အခါမှ ကော်ဖီနံ့လေးတစ်ချက်ရသွားတော့ တကယ်အံ့သြသွားတယ်။
သူက တချို့အချိန်တွေဆို အနံ့ပိုရတယ်တဲ့လေ။ မနက်စောစောနဲ့ ညနေပိုင်းအချိန်တွေဆိုပိုရတတ်တယ်တဲ့။ ညနေ၃နာရီဆို အနံ့အပြင်းဆုံးတဲ့လေ။ ကိုယ်တွေရောက်တဲ့အချိန်က နေ့လည်နေ့ခင်းဆိုတော့ အနံ့မရကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ဖီစိုက်ခင်းတွေမရှိတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေမရှိတဲ့ ကမ်းခြေက ကျောက်တုံးကြီးကနေ ကော်ဖီနံ့ ရတယ်ဆိုတာတော့ အတော်ဆန်းတယ်နော်။
ကော်ဖီကျောက်တုံးကြီးရဲ့ ရာဇဝင်ကလည်းရှိနေသေးပြန်ရော။ အင်ဒိုနီးရှားကို ဒတ်ချ်လူမျိုးတွေ လာကျူးကျော်တုန်းက ဒီကျွန်းကြီးပေါ်ကိုပါရောက်လာကြသတဲ့။ ကျွန်းကဒေသခံတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါ ကျွန်းပေါ်က ကော်ဖီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေက ဒီကျောက်တုံးကြီးနားမှာ ရုတ်တရက် ကိုယ်ပျောက်သွားကြသတဲ့။ သူတို့က သေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တခြားကမ္ဘာမှာ ပိတ်မိနေတာမျိုးဖြစ်နေတော့ သူတို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း မနက်တစ်ခါ ညနေတစ်ခါ ကော်ဖီဖျော်ကြတဲ့အခါမှာ ကော်ဖီနံ့တွေရတာလို့ သိရပါတယ်။
ကော်ဖီကျောက်တုံးကျွန်းကို သွားဖို့တော့ နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ ၂နာရီကြာကားမောင်းပြီး စက်လှေနဲ့ မိနစ် ၂၀ မောင်းရတယ်။ သူ့ဆီသွားမယ်ဆိုရင်တော့ နေ့တစ်ဝက်အချိန်ကုန်တယ်။ အပေါ်က ကျွန်း၃ကျွန်းနဲ့လည်း မနီးတော့ နောက်နေ့သက်သက်ထက်သွားရပါတယ်။ သွားရခက်ပေမဲ့ ကျောက်တုံးကြီးက ဆန်းကြယ်တာရယ်၊ ကော်ဖီနံ့မရရင်တောင်မှ ကမ်းခြေကသာယာပြီး ရေတွေက ကြည်စိမ့်ပြာလဲ့နေတာကြောင့် သွားရကျိုးနက်ပါတယ်။ ဒီကျွန်းကတော့ နည်းနည်းကြီးတော့ ဒေသခံရွာတွေ ရွာသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ ညအိပ်တည်းဖို့တည်းခိုဆောင်တွေလည်း ရှိနေပြီး အနောက်နိုင်ငံသားစုံတွဲတစ်တွဲ အေးအေးဆေးဆေးလာတည်းနေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မတွေ့ချင်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးလာပြီး အပန်းဖြေလိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ်လှတဲ့ ကျွန်းလေးပါ။
ဒီကျွန်းကို ဇွမ်းဇွမ်းကျွန်းလို့ခေါ်သလို Douglas McArthur Island လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို အစွဲပြုမှည့်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်ပြီး သူ့ရုပ်တုကြီးလည်း ဒီကျွန်းမှာရှိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဂျပန်လက်အောက်ကနေ တိုက်ထုတ်ခဲ့တုန်းက အမေရိကန်စစ်တပ်တွေ စခန်းချခဲ့တဲ့ ကျွန်းဖြစ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကြီး အမှတ်တရထားထားတာပါ။
တည်နေရာအရ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်ရေးအရအရေးပါခဲ့တဲ့ ကျွန်းပါ။ ဂျပန်စစ်တပ်တွေ အခြေချခဲ့တဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းဆိုတော့ စစ်သမိုင်းပြတိုက်တွေ သွားလေ့လာလို့ရပါတယ်။ မြို့ထဲမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြတိုက်ကြီးရှိသလို Batu Kopi ဆီသွားတဲ့ လမ်းမှာလည်း Swadaya ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြတိုက်ကို ဝင်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ ပြတိုက်အသေးလေးပါ။ ဒေသခံတစ်ယောက်က သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်ပစ္စည်းတွေကို သူ့အိမ်မှာပဲပြတိုက်လိုလေးပြထားတာပါ။
စက်ဘီးတွေ ဆိုင်ကယ်တွေသုံးကြတာများပါတယ်။ အဲဒီမှာသုံးကြတဲ့ ဆိုက်ကားကလည်းဆန်းပါတယ်။ ကိုယ်တွေဆီမှာလို ဘေးတွဲမဟုတ်ဘဲ ခရီးသည်ကိုအရှေ့မှာထားပြီး နင်းသူကနောက်မှာပါ။ ဟိုတယ်ကနေ ဆိုင်ကယ်ဌားမယ်ဆိုရင် ၂နာရီကို မြန်မာငွေတစ်သောင်းလောက်ကျပါတယ်။ ဟိုတယ်ကနေ ကားဌားရင်လည်းရပါတယ်။ လူများရင်ကားဌားစီးတာပိုကောင်းပါတယ်။ လေဆိပ်ကနေဟိုတယ်အထိကို ၁၅၀၀၀ကျပ်၊ မြို့ထဲ City Tour ဆို ၁၀နာရီမှ ၅သောင်းကျပ်လောက်ပါပဲ။
လူအလာနည်းသေးတဲ့အလျှောက် ဟိုတယ်တွေလည်းမများပါဘူး။ ကမ်းခြေ Resort ကြီး ၂ခုပဲရှိသေးပြီး ဟိုတယ်အသေးလေးတွေနဲ့ တည်းခိုခန်းနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တွေတည်းခဲ့တာကတော့ D’Aloha Resort ပါ။ တစ်ညကို $50 လောက်ပဲကျပါတယ်။ ဘန်ဂလိုလေးတွေပုံစံဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ဘန်ဂလိုတစ်လုံးမှာ အိပ်ခန်း၂ခန်း၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာနဲ့ ဧည့်ခန်းပါပါတယ်။ ကမ်းခြေနဲ့ကပ်နေတော့ အချိန်မရွေးရေဆင်းကူးလို့ရပါတယ်။ လှိုင်းမရှိတော့ ကိုယ်တွေဆီမှာလိုတော့ လှိုင်းစီးလို့မရဘူးပေါ့။ D’ALoha Resort ရဲ့ Email က resortdaloha@gmail.com ပါ။
ဒီထက်ပိုကောင်းတာကတော့ Moro Ma Doto Resort & Spa ပါ။ သူလည်း ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ Resort ပါပဲ။ ရေကူးကန်ပါပါပြီး ဟိုတယ်ရဲ့ Facility ပိုကောင်းသလို ဈေးကလည်း နှစ်ဆလောက်ရှိပါတယ်။ Email က info@moromadoto.com ပါ။
ဒီတော့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ သူများတွေ သွားလေ့မရှိတဲ့ နေရာသစ်လည်း သွားချင်တယ်။ လူရှင်းပြီး သဘာဝနဲ့ တစ်သားထဲကျနေတဲ့နေရာကို သွားချင်တယ်။ ၂ယောက်ထဲ ဟန်းနီးမွန်းထွက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Morotai ကျွန်းကိုလည်း စာရင်းထဲထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Tourist နည်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အလျောက် ညဈေးတွေ၊ ရှော့ပင်းဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေ၊ ကလပ်တွေ ရှိမယ်လို့တော့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ စိမ်းပြာရောင် ကြည်လဲ့နေတဲ့ ရေတွေ၊ ဖြူလွလွသည်းတွေ၊ အဆုံးအစမရှိတဲ့ကောင်းကင်နဲ့ ရေပြင်ကျယ်ကို အေးအေးဆေးဆေးခံစားလိုတဲ့သူတွေနဲ့မှ ကိုက်မှာပါ။
#WonderfulIndonesia #AyokeMorotai #Morotai #MorotaiIndoneisa
တူရကီက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကြီး (World’s First Psychiatric Hospital in Turkey)
Myanmar's Petra or မုံရွာက ရွှေဘတောင်